राज्यद्वारा पीडित रेशम चौधरीहरूलाई नियाल्दा… खोजराज गोले – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
राज्यद्वारा पीडित रेशम चौधरीहरूलाई नियाल्दा… खोजराज गोले
December 15, 2017 सरोकार संवाददाता
काठमाण्डौ २९ मंसिर
रेशम चौधरीसँग व्यक्ति तथा पार्टीगत लगायतका हिसाबले चिनाजान छैन । उनी भूमिपुत्र चौधरी । म भूमिपुत्र तामाङ ! भूमिपुत्र भएकाले एकले अर्कोप्रति सम्मानभाव राख्नुपर्छ भन्छु । कोही भूमिपुत्रमाथि अन्याय हुँदा अर्कोले पक्षमा उभिनु मानवीयता हो । यसरी नै बुझेको छु । मेरो बुझाईमा यहाँका भूमिपुत्रहरू कथित नेपाली हुन् । त्यसैले रेशम चौधरी र म आफैँ पनि कथित नेपाली ! असली नेपाली हुन सकेका छैनौं । राज्यसत्ताको व्यवहारले त्यस्तै भन्दै आएको छ । काठमाडौंमा जरा गाडेको राज्यसत्ताले चौधरीलाई मदेशी अझै भारतीय मात्रै देख्दैआएको सत्य कुरा लेख्न र बोल्न केको डर ? तामाङ लगायतका हिमाली जाति, सभ्यता तथा आदिवासीलाई यो देशको राज्यसत्ताले जहिले पनि भोटे मात्रै देख्दै आएको छ । यही नै दूर्भाग्यको सूचक तथ्यमध्येको पहिलो हो ।
राज्यसत्ता भन्ने बित्तिकै पहाडे बाहुन क्षेत्रीको पोल्टामा रहेको भन्दै र लेख्दै आएको छ । यो कुरा पूर्णतः सत्य हो । किनकी राज्यसत्तामा बाहुन र क्षेत्रीले नै राज गर्दै आएका छन् । वर्णव्यवस्था तथा शाहवंशको उदयपछिको इतिहास यही नै हो । यत्ति मात्रै भन्दै कैयन् बाहुन क्षेत्रीहरूले चित्त दुखाउने गरेका छन् । नदुखाउन् पनि कसरी ? वर्गीय उत्पीडनमा परेका बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गर्नु उचित हुँदैन । सत्तामा रमिरहेकाहरू र सत्तादेखि सधैँ बाहिर रहेकालाई एउटै भन्नुपनि गलत हुन्छ ।
त्यसोभए- बाहुन क्षेत्रीहरूलार्इ वर्गीयताको समस्याले पिरोलेको छ । आदिवासी जनजातिका लागि वर्गीयता मात्रै नभएर जातीयता वा नश्लीयताले पनि पिरोलेको छ । त्यसैले तामाङको साहित्य, सञ्चार, फिल्म, भाषा, संस्कार, संस्कृति सबै सबै यो देशको मूलधारमा परेनन् । नेपाली हुन सकेनन् । तामाङ भाषालार्इ पनि नेपाली भन्ने ठाउँ नै छैन किनकी नेपाली भन्ने स्थानमा कुनै एउटा भाषा मात्रै छ । त्यसैले सत्ताले बोल्ने बाहेकका सबै जातजातिका भाषाहरू राष्ट्रभाषा मात्रै भए । नेपाली हुनै सकेनन् ।
प्रसङ्ग रेशम चौधरी अनि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको हो । रेशम चौधरीले कैलालीबाट भारी जनमत प्राप्त गरेछन् । यद्यपि, उनी ठूला भनिएका पार्टीबाट निर्वाचित भएका होइन रहेछन् । त्यही नै दूर्भाग्य सावित हुँदैछ । अदालतले भ्रष्टाचारी भनेर सजाय दिएको र सजाय कटाएको व्यक्ति पनि होइन रहेछ । उनले मानिस मारेको र डन भएर हिँडेको भन्ने पनि कतैबाट प्रमाणित भएन । त्यसैले उनलाई सत्ताले पत्याएन । बरु सक्तो लत्याउँदै रह्यो । उनीमाथि कैलाली काण्डको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
उनीलाई निर्देशन दिनेहरूलाई मन्त्री बनाउन पनि सत्तालाई केही टाउको दुखाई भएको थिएन । रेशम चौधरीहरू भने यो देश र देशत्वको लागि छिमेकीको प्रहार छेकिरहेछ ढाल भएर ! यद्यपि, राज्यसत्ताले त्यसलाई देशले बलि लिएको अर्थमा मात्रै बुझ्दै आएको स्पष्ट छ । न्यायका लागि बसेको अदालत चुपचाप छ । फरार अभियुक्त रेशम चौधरी भनेर बसिरहेछ । क्षमता राख्दैन यो देशको प्रशासन र अदालत कि रेशम चौधरीहरूका मुद्दा समयमै छिन्न । हिजो अर्कै परिवेश थियो । अब छिन्न सक्नुपर्थ्यो नि ! त्यो पनि छैन ।
केही वर्षअघि नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट सार्ने भनेर खुब बहस चलेको थियो । काठमाडौं र नेपाल नामको राशी मिल्दैन रे भन्दै थिए । कि त देशको नाम फेर्नु पर्‍यो कि त राजधानी नै अन्तै सार्नुपर्‍यो । यस्तै यस्तै भनेर हल्ला गर्दै थिए । आज सोच्छु; रेशम चौधरी र नेपाली सत्ताको पनि राशी नमिल्ने रहेछ । त्यसैले रेशम भन्ने बित्तिकै राज्यसत्ताको मुखमण्डल नै बिग्रिएर आउँछ । नेपाली सत्ता र आदिवासी जनजातिसँगको पनि यही समस्या स्पष्ट देखिएको छ ।
कथित नेपाली भाषाको अभिधा अर्थमा भन्ने हो भने रेशम एक प्रजातिको जीव हो । अझै भनौं कीरा हो । यसको काम भनेको रेशम उत्पादन नै हो । रेशम चौधरीहरू आफ्नो समुदायसहितको नेपाललाई रेशम दिने स्रोत बन्ने अवसरको खोजीमा वा पर्खाइमा छन् । देशको राज्यसत्ता भने भूमिपुत्रबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोगमा आफ्नो नालायिकीपन देख्छ । यही नै समस्या हो । त्यसैले बारम्बार रेशम चौधरीको नाम सुन्दैमा मुखै रातो पारेर रिसाउँछ ।
एक समय रेशम चौधरी एच.बि.सि. एफ.एम. ९४ मेगाहर्जमा कार्यक्रम चलाउँथे । देश परिवर्तनको क्रममा थियो । तत्कालीन सत्ताधारीले उनलाई गीतसमेत बजाउन नदिएको तथ्य हो । अन्य प्रस्तोताले त्यही गीत बजाउँदासम्म छुट थियो तर रेशम चौधरीलाई थिएन । त्यतिखेर अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन । तैपनि, रेशमको पक्षमा धेरै युवाहरूले पत्राचार गरेका थिए । एफ.एम.को कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राखेका थिए । सोच्दैछु, अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जाल व्याप्त भएको भए ! शायद केही न केही फरक हुन्थ्यो । विषयले अर्कै रूप लिने थियो ।
तिनै रेशम चौधरीलाई अनेक प्रहार गर्दै थिए । अन्नतः उनी कार्यक्रम छोड्न बाध्य भएका थिए । यद्यपि, उनले उठाएका विषय भनेको गरीखाने वर्गको मुद्दा थियो । देशमा व्याप्त विसङ्गती, विकृति र भ्रष्टाचार विरुद्ध थियो तर राज्यसत्ताले सहन सकेन । यसको सोझो अर्थ भनेको विसङ्गती, विकृति र भ्रष्टाचारको मुख्यअधिकारी नै तत्कालीन राज्यसत्ता थियो । त्यसैले सहन सकेन भनेर बुझ्न बाध्य थिएँ । त्यस्तैमा एकाएक रेशम चौधरीले फूलबारी एफ.एम.को लाइसेन्स लिएका रहेछन् । देशमा परिवर्तन भएछ जस्तो लागेको थियो । आर.जे.का लागि विज्ञापन गरेका रहेछन् । पुतलीसडक चोक नजिकै कतै कार्यालय रहेछ । खोज्दै पुगेको थिएँ । आर.जे. सम्बन्धी तालिम लिएर बसेको हुनाले पनि मलाई उनको एफ.एम.मा काम गर्ने धोको थियो ।
रेशम चौधरीसँग पहिलो र अहिलेसम्मको लागि अन्तिम भेट त्यहीँ भएको थियो । उनैले अन्तरवार्ता लिएका थिए । त्यसपछि उनीसँग आजसम्मै भेटेको छुइनँ । उनको एकपटक कुनै एफ.एम.बाट अन्तरवार्ता सुनेको हुँ । कैलालीमा एफ.एम. सञ्चालन गरेको भन्ने पनि सुनेकोसम्म मात्रै हुँ । निर्वाचन र रेशम चौधरीको कुरा आएपछि युटुबमा उनको केही अन्तरवार्ता पनि हेरेँ ।
”राजनीति त मानवसभ्यताको हृदयमा बिझाएको काँढो हो । यसलाई निकालेर फाल्नुस् अनि राजनीतिविहीन समाजको कल्पना गर्नुस् । राजनीतिले उत्पीडनबाट मुक्तिको कुरा गर्छ तर यथार्थमा उत्पीडन मात्रै थप्छ । असली मुक्ति राजनीतिबाट सम्भव छैन । यसले त कमजोरलाई दबाउने र अन्याय गर्ने अधिकार मात्रै दिन्छ ।” यो मेरो आफ्नै मत हो । यससम्बन्धी धेरै कुरा छन् तर यतिखेर राख्न सकिने कुरा भएन । रेशम चौधरी राजनीतिबाटै परिवर्तनका लागि लागेका मान्छे । त्यसर्थमा उनीसँग मेरो वैचारिक मतको भेट नहोला पनि !
फेरि पनि उनीमाथि राज्यसत्ताले अन्याय गर्दै अघि बढेको दृश्यले मनमा छोएको छ । भूमिपुत्र विरूध्द विश्वव्यापी रूपमै अत्याचार र नरसंहार भएका छन् । त्यस्तै श्रृङ्खलाद्वारा पीडित रेशम चौधरीको पक्षमा मानवीयताको नाताले लेख्दैछु । ‘कानून नियम भनेका त न्याय स्थापित गर्ने साधन होइन । त्यो त कमजोरमाथि शक्तिसम्पन्नले अन्याय गर्न दिइने सुविधा मात्रै हो । त्यसैले त राजसंस्था हुँदा राजपरिवार कानूनभन्दा माथि थियो । सत्ता पनि कानूनभन्दा माथि बस्ने गरेको छ । तथापि, राजसंस्था कानूनभित्रै रहनुपर्ने नेपाली मत बन्यो । त्यहीक्रममा शक्ति सङ्घर्ष चल्यो । राजसंस्था समाप्त भयो । अब सत्ताले आफूलाई कानूनमाथि राख्ने प्रयास अझै छोडेको छैन । जुन गलत छ ।
दशवर्षे युद्धकालमा सत्रौं हजार मानिस मारे । अनेक बहानाबाजी गरेर मारे । गोरु जोतिरहेका तत्कालीन काङ्ग्रेसपार्टीकै भोटर पनि सुरक्षाकर्मीका नजरमा माओवादी सावित भए । अनेक नक्कली दोहोरो भिडन्तमा कैयन् निर्दोष मारिए । दोषीहरू पनि प्रसस्तै मारिए । सत्ताले मार्न छुट पाउने अनि विद्रोहीले मार्न नपाउने तत्कालीन सत्ताको मत थियो । त्यसैले त विमानस्थल निर्माणमा जुटेका मजदूरहरूका एकै चिहान बनाए । आफन्तको घेवाबाट घर फर्कँदै गरेका तामाङको कत्लेआम गरेर राज्यसत्ताले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो । मानिसको टाउकोको मूल्य तोक्तै अघि बढ्यो । निर्दोषको सुकुटी चपाउँदै तत्कालीन सत्ताले राज्यशक्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्‍यो ।
राजनीतिशास्त्रको यसमा आफ्नै मत होला । मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको हिसाबले यत्ति भन्छु कि- हत्या सत्ता वा विद्रोही जसले गरेपनि जघन्य अपराध हो । त्यसैले माओवादी भन्नेले मात्रै हत्याको दोष लिनुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । तत्कालीन सत्ताधारीले पनि आफूले मारेका मानिसको हत्या अभियोगमा सजाय भोग्न तयार हुनैपर्छ । होइन भने माथि भनेजस्तैगरी राजनीति हाम्रो मुटुमा बिजाएको काँढोभन्दा अर्को केही हुनेछैन ।
फेरि पनि, रेशम चौधरीलाई फरार अभियुक्त भन्दै निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन आनाकानी गर्ने र पक्राउ गर्न खोज्छ भने यस्तो राज्यसत्ता कम्तिमा पनि आदिवासी जनजातिका लागि सहनयोग्य हुने छैन । चौधरी समुदायले आफ्नो बडघरको प्रमुख पहाडबाट तरार्इ झरेका क्षेत्री, बाहुनलाई बनाएर उदारता देखाइसकेका छन् । प्रत्युत्तरमा आदिवासी जनजातिको रगत पिउनुलाई आफ्नो बहादुरी ठान्छ भने यस्तो सत्ता विरुद्ध तातो र रातो रगत भएका आदिवासीका सन्तानका विचारमा तिनका पितृहरू चढ्न कुनै बेर लाग्ने छैन । ती पितृहरू; जसलाई राज्यसत्ताले अनेक बहानामा मारेका थिए । देश निर्माण (कथित एकीकरण)को नाममा मारिएका पितृका भडि्करहेका चित्तहरू आदिवासी जनजाति सन्तानका विचारमा प्रवेश गरेर उपद्रव मच्चाएको हेर्ने रहर पाल्छ भने सत्ताले त्यो आफ्नै मृत्युसंस्कारमा मलामी जाने सोच राखेको भनेर बुझ्नुको कुनै विकल्प हुनेछैन ।
देश कसरी चलाउने भन्ने सत्ताले कहिल्यै बुझ्नै सकेन । आऊ हामी पढाउनेछौं देश चलाउने नयाँ आदिवासीवादले युक्त पद्धतिको कुरा ! आऊ बुझाउनेछौं- ”आदिवासीवाद भनेको मानवसरह प्रकृति र चराचरजगतको समान अधिकार सुनिश्चितता हो भन्ने कुरा !” त्यसैले देखादेखी दिनलाई रात र रातलाई दिन भनेर घोषणा नगर । यस्तो गर्नु भनेको राज्यसत्ताको मगज बिग्रिएको सङ्केत हो । समयमा उपचार गराऊ । तथ्यलाई बुझ्ने प्रयास गर । मानवीयतापूर्ण व्यवहार गर । त्यसको लागि सद्बुद्धि पलाओस् भन्दै धन्यवाद !!!
इलाममा आगलागीमा परेर महिलाको मृत्यु
झापाका भुटानी शरणार्थीले भुटानको राष्ट्रिय दिवस मनाँदै यस्तो दुखेसो पोखे